Air Chucks Factory, Suppliers |China Air Chucks Vagadziri
Yese Kuchengetedzwa Kwemhepo Coupler, 7 Mu1
Professional Tire Inflator ine Gauge
Pistol Grip Tire Inflator ine Gauge
Vezvekutengeserana Tire Inflator With Gauge
Kiya PaTire Air Chuck
Chikamu # AC2073
● Revers angle dual head lock-on air chuck inoenderana nemwero yemotokari vhiri ine Schrader mavharuvhu uye inogona kuiswa kuzadza matai akasiyana-siyana, kusanganisira motokari, koni, bhazi, pick-up, tirakita, rori uye motokari inorema.
● The angled push-pull chuck ine 2 mapoinzi ekubatanidza: musoro wakatwasuka wakanyatsogadzirirwa mavharuvhu emukati/amwe mavhiri ayo dzinde iri kunze, uye 30 dhigirii reverse musoro kune mavhiri ekunze ayo tsinga yevharuvhu iri mukati.Saka inokwanisa kuwana mavharuvhu akaoma-kusvika.
● The angled air chuck ine sarudzo yemhando yakavharwa kana yakazaruka yekuyerera.Rudzi rwakavharwa runovakwa nevharuvhu yakavharwa-yakavakirwa-mukati kuti ichengetedze mweya kumashure kusvika yatsindirwa pahunde yevharuvhu.Izvi zvinofanirwa kushandiswa nemhepo compressors kana mweya wekupa masisitimu pasina vharafu pakati pemhepo sosi uye tire chuck.Kana ichishandiswa senge inflating tip yevhiri inflator kana tire geji, inofanirwa kuve yakavhurika kuyerera rudzi air chuck kuitira kuti inflator yako kana geji isatyoke.
● Musoro weviri wakagadzirwa ne zinc alloy, uye chivharo chesimbi chine chrome plated iyo inopa zviri nani kusagadzikana kwekuora.
● Iyo 6 inch / 150mm kureba hunde uye mbiri mbiri yechuck body yakaputirwa ne polyurethane kuitira kusununguka ngura uye inokubatsira kuti usvike mavhiri emukati uchichengeta maoko ako akachena.
● Kudzvinyirirwa kukuru kwe150 pounds per square inch
● Inopinza ine 1/4” NPT shinda yechikadzi ine 5/8” kana 16mm hexagon terminal, inofambirana nechero mhepo ine hama dzechirume shinda.
● Musoro wakatwasuka uye musoro wakarerekera kumashure waigona kukiya pashinda yevharuvhu.
Bhora Foot Chuck
Chikamu # AC2098
● Ball foot chuck yakagadzirirwa kukwira zvakananga kune Schrader valve stem, yakadai sevhavha yevhiri, tangi yemhepo.
● The ball foot chuck inovakwa ne-built-in shut-off valve kuti imise kuyerera kwemhepo kana chuck isiri kushandiswa, uye mhepo inoyerera chete kana chikwata ichibatanidzwa nevharuvhu.
● Hose barb inokodzera 1/4″ yemukati dhayamita hose.
● Bhora tsoka chuck inoratidzira Zinc alloy body ine chrome plated, iyo inopa zvakanyanya kusimba, kusaita ngura uye kusapfeka.Brass cap uye valve inoita kuti iwedzere kusimba kunyangwe paine hunyoro mumhepo yakamanikidzwa.
● Mhepo yakakura ye150 pounds per square inch kana 10 Bar.
● Rudzi rwakavhurika rwejeji yemagetsi inowanikwawo.Type yekuvhara ndeyemhepo chete.
● Nhamba shoma yekuraira: 2,000pcs.
Dual Head Tyre Chuck
Chikamu # AC2097
● Dual head tire chuck yakagadzirwa nezinc alloy nendarira.Uye kusunda-kudhonza musoro wembiri wakanyatsogadzirirwa mavharuvhu akaomarara kana vharafu yakatarisa mukati.
● Iyi chuck yemusoro weviri inowanika kune zvose zvakavharwa kuyerera uye kuyerera kwakazaruka.Rudzi rwakavharwa rwakagadzirwa neyakavharwa-vhavhavhavhavha yemhepo, iyo inovhara kuyerera kwemhepo uye mhepo inoyerera chete chuck inobatanidzwa nevhiri revhavha stem.Rudzi rwekuyerera rwakavhurika rwakagadzirirwa tireji inflator geji kana pombi yemhepo.
● Iyo mbiri yemusoro tire chuck ine 1/4" yevakadzi NPT kana BSP inlet ine 5/8" / 16mm hex connector, inoenderana neakawanda air hose, tire inflator uye air compressor accessories.
● 6 "/ 150mm yakareba hunde ine chrome-plated, iyo isina ngura uye inokubvumira kusvika mukati mavhiri pasina kusvibisa maoko ako.
● Yakashandiswa zvakanyanya kune Schrader valve yemotokari, rori, bhazi, tirakita uye motokari huru nezvimwe.
Chikamu # AC2096
● Dual head yakagadzirwa nezinc alloy, uye musoro wakatwasuka wepush-pull air chuck wakanyatsogadzirirwa mavhiri emukati/rimwechete kana mavharuvhu akaomarara, uye 30° reverse musoro wemavhiri ekunze.
● Iyi miviri miviri yakananga tsoka yemhepo chuck inowanikwa kune zvose zvakavharwa kuyerera uye kuyerera kwakazaruka.Rudzi rwakavharwa rwakagadzirwa ne-built-in shut-off valve for air line.Mhepo yaipfuura chete kana mhepo chuck yabatwa netsinga yevharuvhu yevhiri.Rudzi rwekuyerera rwakavhurika rwakagadzirirwa tireji inflator geji kana pombi yemhepo.
● Iyo miviri miviri yemusoro yakatwasuka tsoka air chuck inoratidzira 1/4" yevakadzi NPT kana BSP inlet ine 5/8" / 16mm hex connector, inoenderana neakawanda air hose, tire inflator uye air compressor accessories.
● Migumo miviri yemisoro miviri yakatwasuka tsoka air chuck kukiya pashinda yevharuvhu yevhiri.
● Kudzvinyirirwa kukuru kwe150 pounds per square inch.
● Inoshandiswa kumotokari, rori, bhazi, tirakita uye motokari huru nezvimwe (ine Schrader valve)
Clip PaTire Chuck
Chikamu # AC2085
● The clip on tire chuck is open flow air chuck with clips
● Inobvumira chuck kuti ibatike nyore patambo dzevharuvhu kuitira kukwira kwemitengo kwemavhiri pasina maoko.
● Yakagadzirwa ne 1/4 inch Female national thread, 3/4 inch hex
● Chikwata chiri pavhiri chuck chinopindirana nemavharuvhu e schrader, kukwira kwemitengo kwemota zhinji, semota, bhazi, turera, mudhudhudhu uye bhasikoro, rori, SUV, bhasikoro remagetsi, mudhudhudhu, zvakare inoenderana nevhiri pressure gauge uye compressor.
● Kuyerera kwakavharwa kunowanikwawo
● Material: clip yedu pane tire chuck inonyanya kugadzirwa nendarira iyo inogara yakasimba uye yakasimba, yakagadzirwa neyakanaka corrosion resistance uye unogona kuzvishandisa kwenguva yakareba.
● Mhepo yakawanda yemhepo ndeye 250 psi
Air Hose Chuck, Euro Style
Chikamu # AC2087
● The air hose chuck ine hose barb ye 1/4″ hose yemukati dhayamita.
● Kunyanya mhepo yemhepo hose chuck i150 pounds per square inch
● Zvose zvakavhurika kuyerera uye kuvharwa / kuvhara mhando yemhepo chuck iripo
● Inokodzera kushandiswa pamajeji e inflator kana mutsara wemhepo
● The air hose chuck yakagadzirwa uye inogadzirwa kune yakanyanyisa mitemo
● Inopindirana nemavharuvhu e schrader, inflation nozzles emotokari zhinji, dzakadai semota, bhazi, trailer, mudhudhudhu uye bhasikoro, rori, SUV, bhasikoro remagetsi, mudhudhudhu, zvakare inoenderana nevhiri pressure gauge uye compressor.
● Material: inonyanya kugadzirwa nendarira iyo inogara yakasimba uye yakasimba, yakagadzirwa nekudzivirira kwakanaka kwekuora uye unogona kuishandisa kwenguva yakareba.
Clip PaTire Air Chuck
Chikamu # AC2095HB
● Chikwata chiri patai air chuck chakakodzera 1/4″ ID hose
● CNC machined hose barb yehupamhi yakarurama uye yakachengetedzwa yakachengetedzwa nemhepo yakawanda
● Kunyanya kudzvanywa kwemhepo kwe clip patai air chuck i 150 pounds per square inch
● Yakavharwa / yekuisa chisimbiso rudzi rwekushandisa pamhepo compressor kana mutsara wemhepo.
● Vhura mhando inowanikawo, yegeji yemagetsi
● Joko rinorema rinogadzirwa nesimbi yakakora, isina kuremara kana kukombamira pakushandiswa kwezuva nezuva.
● Bhora tsoka chuck inobvumira kunamatira zviri nyore kune tambo dzevharuvhu nekuda kwemaoko emahara tyre inflation.
● Material: clip on tai air chuck inonyanya kugadzirwa nendarira iyo inogara yakasimba uye yakasimba, yakagadzirirwa negora rakanaka rekudzivirira uye unogona kuzvishandisa kwenguva yakareba.
Bhora Foot Air Chuck
Chikamu # AC2094
● The ball foot air chuck inogona kuiswa yakananga papoipi yemhepo
● Iyi chuck yemhepo yebhora ine vharafu inovhara-mukati yekumisa kuyerera kwemhepo kana chuck isiri kushandiswa.
● Mhepo inobuda chete panguva yekukwira kwemitengo (inosangana nevharuvhu yevhiri)
● Inokodzera 1/4″ ID hose
● Mhepo huru ye150 pounds per square inch
● Iyo bhora tsoka yemhepo chuck inowanikwawo mune yakavhurika mhando ye inflator geji
• Dual musoro mhepo chuck yakavhurika kuyerera mhando yemavhiri geji uye inflators
• Dual head air chuck inoita kuti mavharuvhu evhiri asvike nemisoro miviri kuti ive nyore kupinda.
• Kupinda mukati kana vharafu yakatarisa mukati.Yakakura yekusvika muDually marori uye mamwe makona anonetsa
• Dual head air chuck yakavakwa nemusoro wakasimba wendarira, yakavakwa kuti isamirire garaji repamba kana kushandiswa kwechitoro.
• Maximum pressure rating ye150 psi
• Kureba Kwese: 8”/ 200mm
• 1/4″ kubatanidza kweNPT yevakadzi
Kiya PaTire Chuck
• Kiya pane chuck yevhiri yezvizhinji zvekutengesa uye zveindasitiri kuzadza mhepo zvikumbiro.
• Kiyi pa tire chuck inoshanda sekukurumidza coupler;inosveta pane chero vheruvha yevhiri uye inogara yakamira kusvika yaburitswa - hapana chikonzero chekuchengeta chuck kuitira kuti mweya uenderere mberi.
• Kiyi pavhiri chuck inogadzirwa nemhangura, inovakwa kuti isamirire garaji repamba kana kushandiswa kwechitoro.
• Maximum pressure rating ye300 psi